Dawladda Kanada waxay $3 Milyan ugu deeqday Cilmi-baadhista Psilocybin • Daawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn Caafimaadka Dowladda Kanada ayaa $3 milyan ugu deeqday cilmi-baarista psilocybin
Dowladda Kanada ayaa $3 milyan ugu deeqday cilmi-baarista psilocybin
albaabka daroogada 11 May 2022
maqaal by daroogada 11 May 2022
Xafiiska Cilmi-baarista Federaalka Kanada ayaa siin doona cilmi-baarayaasha $3 milyan si ay u sahamiyaan faa'iidooyinka isticmaalka psilocybin daawaynta cudurka dhimirka.
Toddobaadkii hore, Machadyada Cilmi-baarista Caafimaadka ee Kanada (CIHR) Codsi deeq ah oo lagu maalgalinayo cilmi-baarista teraabiyada cilminafsiga ee maskaxdu ka caawisay saddex cudur oo dhimir oo gaar ah.
Daraasadu waxay taageertaa tijaabada caafimaadka ee Wajiga 1 ama 2 ee la kala soocay ee ku habboon isticmaalka psilocybin ee daaweynta ku-tiirsanaanta ama cilladaha isticmaalka mukhaadaraadka, xanuunka weyn ee niyad-jabka iyo dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda ee dhammaadka nolosha ee bukaannada qaba kansarka sare.
Ujeeddadu waa in la xoojiyo saldhigga sayniska oo la ballaariyo cilmi-baarista iyada oo loo marayo tijaabooyin cusub oo caafimaad.
Fursadaha lagu maalgelinayo cilmi-baarista psilocybin gudaha Kanada
Maalgelinta waxaa bixin doona Istaraatiijiyada Maandooriyaha iyo Maandooriyaha Kanada (CDSS), oo ay hoggaaminayso Health Canada iyo iyadoo lala kaashanayo CIHR Institute of Neurosciences, Caafimaadka Maskaxda iyo Qabatinka (CIHR-INMHA).
"Fursadda maalgelinta hadda jirta waxay ballaarin doontaa saldhigga sayniska ee ku xeeran psilocybin-ku-caawinaysay teraabiyada cilminafsiga si loogu sheego siyaasado iyo qawaaniin wax ku ool ah oo loogu talagalay horumarinta caafimaadka Kanadiyaanka iyo dadka Kanada ee la kulma cudurrada dhimirka", akhriya ogeysiis ee maalgelinta.
Fursadaha lagu maalgeliyo cilmi-baarista psilocybin gudaha Kanada (afb.)
Lacagta guud ee $3 milyan ah ayaa loo kala qaybin doonaa saddex deeqo, iyadoo lacagta ugu badan ee deeqda ah ay noqon doonto $500.000 sannadkii ilaa laba sano oo isku geyn ah $1 milyan deeq kasta oo barata xanuunka dhimirka.
"Waxaa si xoog leh loogu dhiirigelinayaa in dadka leh waayo-aragnimada nolosha iyo/ama nolosha lagu daro kooxda cilmi-baarista si ay uga qaybqaataan, sida ku habboon, naqshadeynta, hirgelinta, abaabulka aqoonta iyo / ama qaybaha kale ee habka cilmi-baarista", waa sharraxaadda maalgelinta.
Xilliga kama dambaysta ah ee codsigu waa Sebtembar 6, kama dambaysta codsiguna wuxuu dhammaanayaa Oktoobar 4. Maalgelintu waxa ay bilaabmi doontaa bilowga Maarso 2023.
CIHR waxay martigelin doontaa webinars si ay u taageerto codsadayaasha shuruudaha maalgelintan oo ay uga jawaabaan su'aalaha, kuwaas oo u horreeya oo bilaaban doona Juun 9.
Sources ao Canada (ENshaandhada shaandhadaEN), MuggleHead (EN)
Dhirta Ruuxa Hindida: lotus buluug ah
Spain ayaa ansixisay dawadii ugu horreysay ee ku saleysan xashiishadda...
Cilmi baaris lagu sameeyay xashiishadda cannabis ee ka hortagga suuxdinta: Dutch...
Sidee bay saliidda CBD kuu caawin kartaa cudurka neuropathy?